Izitshixo zokonwaba njengesibini-Ingcebiso kuMadoda aStylish | Amadoda aseStylish
Ubudlelwane njengesibini banemfuno zabo kunye nezibophelelo zabo. Akusoloko kulula ukuzigcina xa ubuthandana iminyaka kwaye nabelane ngento yonke kunye. Izitshixo zokonwaba Njengesibini, bayinto efanelekileyo ukwazi ukuze baqhubeke nokudala infinity yeemvakalelo kunye namava.
I-Monotony kunye nokukruquka njengesibini sesinye sezizathu zokuba ubudlelwane obuninzi buwohloke. Ukubuyisela kwakhona ezo zihlandlo zolonwabo ngaphandle kokushiya umanyano olugciniweyo luya kuba yenye yeempumelelo ekusetyenzwa kuzo.
1 Ezona zitshixo zokonwaba njengesibini
1.1 Musa ukunyanzelisa ubudlelwane okanye ufune ukulalanisa
1.2 Kufuneka ube ngamaqabane okwenene
1.3 Gcina iinkcukacha ziphila
1.4 Zihlonele izilangazelelo zomntu ngamnye yaye ukwazi ukuzihlakulela
1.5 Fumana ixesha lokuba neqabane lakho wedwa
Ezona zitshixo zokonwaba njengesibini
Ayikho iresiphi egqibeleleyo ukunika isitshixo sendlela yokugcina ubudlelwane obonwabisayo. Kukho iingcali zokunyanga ubudlelwane ukuba zikwazi ukubeka iliso kunye nokuvavanya ukuba yintoni igalelo kunye yintoni ukusilela. Kodwa unokuphinda usebenzise amanye amacebiso esiwanikeza apha ngezantsi kwaye ukwazi ukubona into engekhoyo kubudlelwane bakho.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba Iresiphi yolonwabo Akuxoki ekudityaniswe nomntu othile, okanye kufuneka omnye umntu akhanyisele ubukho bakho. Ulonwabo luhlala ngaphakathi kuwe, kodwa lunokugqithwa ukuba adventure kwinkampani kwaye ugqibezele ngakumbi olo lwaneliseko.
Musa ukunyanzelisa ubudlelwane okanye ufune ukulalanisa
Ubudlelwane njengesibini kufuneka buhambe nje. Awunakunyanzela ubudlelwane ukuba busebenze kwaye ufune ukuthomalalisa okanye ukutyhola. Ukuba omnye wenu uthanda ukunyelisa omnye umntu, awukwazi ukunyanzela elinye iqela ukuba lenze okufanayo. Ukuba kwinqanaba eliphezulu lolonwabo akuthethi ukuba kuya kuhlala kunjalo, kufuneka kwakhona ugcwalise imingxuma ethile ngamaxesha.
Kufuneka ube ngamaqabane okwenene
Uthando nobuhlobo zimele zimanyane kubudlelwane obonwabisayo. Yonke ikhonkco kufuneka isebenze ngokuhambelanayo xa kukho intlonipho kwaye yenye yezona zitshixo ezilungileyo. Olu hlobo lwentlonipho luthetha ukuba nokuqiniseka ukuba omnye umntu asiyi kuphoswa okanye sisikhohlise. Kukuba nentembelo epheleleyo kwaye koku kufuneka usebenze kuyo.
Ungayenza njani ngokufanelekileyo? Ukuqala ngokuhlonela nasiphi na isigqibo, kungekhona ukugxeka okanye ukugxeka. Musa ukuba nenjongo embi sebenzisa ubuthathaka bomnye umntu ukuze ukwazi ukuwawisa njengeebhombu, kuba ngaloo ndlela awunakonwaba. Kufuneka ube ngamaqabane abalaseleyo kwaye ukwazi ukusebenzisa iingcebiso ezinkulu kunye namava ukwabelana njengesibini.
Gcina iinkcukacha ziphila
Izibini ezonwabileyo gcina iinkcukacha ezininzi ziphila ukuba kwabanye inokufaniswa ne 'i-attachment'. Kodwa le yindlela abaninzi abayitolika ngayo ukuqhubeka nokugcina elo dangatye, ngokuthobela.
Izibini ezininzi zigcina olo manyano neenkcukacha ezinjengokuhamba kunye esitratweni, ukuthumela imiyalezo imini yonke, besithi 'Ndiyakuthanda' ngamaxesha athile okanye ukudlala ngokuphulula okanye ukwanga.
Zihlonele izilangazelelo zomntu ngamnye yaye ukwazi ukuzihlakulela
Umntu ngamnye unezinto azithandayo kunye nezinto azithandayo. Akuyomfuneko ukuba ube nomdla ofanayo kwaye ukholelwe ukuba usisibini esigqibeleleyo, kodwa ukwenza umanyano lube sesikweni. incasa efanayo kunye neenjongo. Nokuba kukho iyantlukwano, kufuneka uyihlonele into afuna ukuyenza omnye umntu, kuba akunyanzelekanga ukuba nizibophelele ekwenzeni yonke into kunye. Ewe banako yenza amakhonkco amaninzi kunye nezinto ezinomdla phakathi kwabo ukonwabela iimvakalelo ezintsha.
Fumana ixesha lokuba neqabane lakho wedwa
Olu lwazi lungabonakala lunzima xa uneqabane kunye nabantwana. Injongo yentsapho ayisoloko ibelana ngalo lonke ixesha njengabazali nabantwana. Kusempilweni ukukhangela ixesha yabelanani njengesibini sodwa kwaye ngaphandle kweziphazamiso. Kumalunga nokukwazi ukunikela ngako konke, ukuphumla kunye nokudala ubuhlobo obusondeleyo.
Nangona kubonakala ngathi ndinjalo, kuyimfuneko ukuyithobela, kukwalungile chitha ixesha nawe. Isibini kufuneka sihloniphe le njongo kunye nawuphi na umsebenzi ophilileyo abafuna ukuwenza ngaphandle kobudlelwane, ekugqibeleni, uya kuba nempilo yengqondo.
Nanini na xa kukho ukungangqinelani phakathi kwesibini kufuneka uthethe, ungathi cwaka. Ukuba basindisiwe, inokuthi ekugqibeleni yenze iqela elikhulu kakhulu kwaye akunakwenzeka ukuba kuxoxwe ngokulula kakhulu ngayo yonke into ethi cwaka. Unxibelelwano lusisiseko salo naluphi na ubudlelwane, yonke into inokuxoxwa ngayo kodwa isuka kwintlonipho.
Kubudlelwane obunempilo kubalulekile Chaza iimvakalelo nize nixubushe ngendlela ekunokuthethwa ngayo ukuze kungenzi nto. Kufuneka wenze umzamo woku zama ukunikezela Kwaye ufike kwisivumelwano. Ukuba kufikelelwe kwisivumelwano, kufuneka kuqondwe ukuba kufuneka kubekho ibhalansi yeenjongo Phakathi kokubini. Umntu akanakusoloko enikezela ngaphezu komnye kwaye leyo yenye yeengxabano ezininzi ezikhoyo phakathi kwesibini. Ingxoxo kunye nokuqondana yenye yeziseko zesibini esonwabileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Izitshixo zokonwaba njengesibini